Iwe unofanirwa kuenda kune iyo capital kuwedzera? | Ehupfumi Zvemari
Iwe unofanirwa kuenda kune iyo capital kuwedzera?
Ehezve, iro rekuwedzera capital isangano rakabatana zvakanyanya neyakaenzana. Kusvika pakuti iwe uchave wauya kanopfuura kamwe chete. Nekuti zvazviri, iri zano iro rinoshandiswa kazhinji nemakambani akanyorwa ku zvishongedze nemari kuzadzisa bhizinesi rako zvido. Ose ari maviri akakosha emutengo weSpanish stock market, pamwe neayo epakati nepadiki capitalisation. Mupfungwa iyi, hapana kana akasiyana panguva yekutanga bhizimusi kuwedzera.
Uye zvakare, iri bhizimusi kufamba kwawana kukosha kwakakosha nekuda kwekukanganisa kwaro Banco Santander. Zvakanaka, iri chokwadi chakakosha chiri kuvandudzwa sechikamu chehurongwa hwemari yekuwana Banco Yakakurumbira. Uye izvo zviri kuendesa kune yakakura chikamu chevashoma nepakati varimi vanonyudzwa mune ino nzira yekukosha kukuru mu investments. Nekuti haugone kukanganwa kuti iwe unogona zvakare kuvaita vabatsire.
Nekudaro, mumwe wemibvunzo inozvibvunzwa nevashambadzi zvakanyanya ndeyekuti vanofanirwa kuenda kunowedzera mari inopihwa nemakambani akanyorwa pamisika yemari. Nekuti kwete mune zvese zviitiko zvichave zvakafanana mhedzisiro. Zvinoenderana nezvinhu zvakawanda izvo kubva zvino zvichienda mberi uchave uine ruzivo urwu. Saka kuti kubva ikozvino unoziva zvekuita nguva dzose. Nekuti chimwe chinhu chaunofanirwa kuchengeta mundangariro ndechekuti haizove sarudzo iri nyore yauchazofanira kuita. Nekuti iwo mafambiro mumusika wemasheya ane akawanda macheto aunofanirwa kuziva.
1 Kuwedzera kwemari: chikonzero chayo chekuve
2 Zvinangwa zvekufamba uku
3 Zvakagamuchirwa zvakashata nemisika
4 Kutanga kuita: mutengo wakadzvanywa
5 Ndezvipi zvinangwa zvaunogona kuzadzisa?
Kuwedzera kwemari: chikonzero chayo chekuve
Chekutanga pane zvese, haugone kukanganwa kuti inyanzvi iyo makambani akanyorwa anofanirwa kusimudzira mabhizinesi avo. Kunyangwe kuita matsva matsva kuitira kuratidzwa kuri nani mumisika yemari. Icho chinhu chave chakajairika pakati pemapoka ese makuru emari. Kunyangwe mhedzisiro yaro isiri yakafanana nguva dzose. Nekuti inogona kuve yakanakira shanduko yemakambani. Asi zvakafanana hazviitike mune zvimwe zviitiko, sezvaungaona mumakore achangopfuura.
Panguva iyo kuwedzera kwemari kunotangwa, ndivo vari vaimbove vagovani vane imwe sarudzo yekuenda kune izvi zvinoshamisa chokwadi. Kunyangwe zvakare kana iwe usina kumira mune yakatarwa kukosha iwe unogona zvakare kutora chikamu mune urwu rudzi rwekuvhiya. Nekuti iwe uchavaitawo kuti vabatsire mukati memwedzi mishoma kubva pakuburitswa kwavo. Ndicho chinangwa chakateedzerwa nekuitwa kwayo mumisika yemari. Nekuti zvirizvo, mune akanakisa mamiriro, iwe unogona kuwana yakawanda mune aya akasarudzika uye ikozvino echinyakare mashandiro panguva imwe chete.
Zvinangwa zvekufamba uku
Iko hakuna kana kusahadzika kushoma kwekuti chinangwa chemumwe saver ndechekuwana mashoma maeuro kubva kune yega yega yezvikamu zvitsva. Chero zvazvingaitika, usafunge kuti purofiti yayo ichagadzirwa mazuva mashoma mushure mekutanga kwayo. Nekuti izvi hazvisi chaizvo nenzira iyi, asi mabhenefiti enda kumatemu akarebasemuenzaniso munguva yepakati nepakati. Kana izvo zvaunoda zviri zvishoma kana zvishoma nekukurumidza kudzoka kuburikidza neaya mashandiro muequities, iwe zvirinani kukanganwa nezvekuwedzera kwemari.
Mhedzisiro yaro pamutengo wekuchengetedzeka unobatanidzwa mumaitiro aya ichatanga kucherechedzwa mushure memwedzi mishoma. Nguva iyo iwe uchafanirwa kuzvibvunza pachako kana zviri nyore kuti iwe ubvise nzvimbo dzakaunganidzwa kubva kune aya mafambiro. Kusvika padanho rekuti muzvakanaka kwazvo zviitiko zvinokwanisika ku kupeta kaviri mutengo wezvikamu zvitsva. Kunyangwe kukatyamadza kwakanyanya hakugone kutongwa kunze. Ichi chikonzero nei zvichikosha kuti iwe usarudze inonyanya kukwikwidza capital kuwedzera. Nekuti haugone kukanganwa kuti havazi vese vakafanana, kure nazvo.
Zvakagamuchirwa zvakashata nemisika
Pamusoro pezvose, kuwedzera kwemari hakugamuchire zvakanyanya nemisika yemari. Izvi zvinokonzerwa nekusavimbika pane chikamu chevashambadzi vakatsiga cherudzi urwu rwemaitiro mumisika yemari. Semhedzisiro yavo, hazvishamise kuti mutengo wezvikamu inoderera mushure memazuva mashoma. Nekuti kunewo zvakare varimari vashoma nepakati varimari vanosarudza kugadzirisa zvinzvimbo. Kuti uedze kusanyudzwa mune zvechimbioko maitiro anogona kuunza zvinorema kurasikirwa. Zvirinani kana zvasvika kune akareba mareti.
Kubva pane ino mamiriro ese, zvinokurudzirwa zvikuru kuti uongorore zvakadzama imwe neimwe yemari inowedzera iyo ivhu mumisika yemari. Asi pamusoro pezvose, ona mamiriro avo uye kana zvakanaka kuti iwe unyore. Zvekuti nenzira iyi unogona kuita sarudzo chaiyo yekudzivirira zvaunofarira semushambadziri investor. Iko mutengo kwaunofanira kunyorera iwo matsva mashejendi unenge wakakosha kwazvo. Uye kana mhinduro iri hongu, hauzove nesarudzo kunze kwekuenda kwairi kuti ubudirire pazviri.
Kutanga kuita: mutengo wakadzvanywa
Imwe yeakanyanya hunhu hunobva mukufamba uku muequities ndeyekuti migove yemigove ichawira munguva pfupi. Tsananguro yake yakapusa uye imhaka yekuti sezvo paine zvikamu zvakawanda mumisika yemari, iwo akakosha zvishoma. Hazvishamise kuti ivo vari kutengesa zvikamu uko mitengo inogadziriswa zvinoenderana nemitemo yekufamba kwemari. Mupfungwa iyi, hupfumi hwako hunogona kutambura uye kurasikirwa nehunhu hwayo muzvikamu zvinotevera zvekutengesa. Mune kukura kukuru kana kushoma, zvinoenderana newedzero yemari kwaunoenda nguva dzose.
Zvisinei, sezvo mazuva achifamba, mitengo inowanzoenderana nemutengo wavo chaiwo. Ehezve, kana iko kuwedzera kwemari kwapera. Kubva pane ino mamiriro, mushure memwedzi mishoma iwe unogona kuita mabasa ane pundutso anotorwa kubva kuchinhu chinozivikanwa mumakambani akanyorwa pamisika yemari. Neichi chikonzero chaicho, aya mashandiro anoitirwa iyo yepakati uye yakareba nguva. Kune yakanyatso tsanangurwa yakajeka investor chimiro izvo inosanganisira yakanyanyisa kuchengetedza. Iko kuchengetedzeka kunokunda dzimwe nzira dzekudyara mumusika wemasheya.
Ndezvipi zvinangwa zvaunogona kuzadzisa?
Mune zvese zviitiko, kana iwe ukaenda kune imwe yeaya akasarudzika maitiro mune bhizinesi renyika, unogona kubatsirwa kubva akateedzana ezvakanakira. Izvo zvimwe hazvigone kugadzirwa kubva mukutenga uye kutengeswa kwemasheya zvakananga mumisika yemari Zvichava zvakakosha kuti iwe uzvitorere ivo mumwedzi iri kuuya iwe uchave uri mumwe wevashambadziri vari kuenda kune imwe yemazhinji mari inowedzera inoitika gore rega rega. Nekuti icho chinhu chiripo mwedzi nemwedzi uye gore mushure megore. Chaizvoizvo ivo vanozove anotevera mafungidziro atichazokupa kwauri kubva zvino zvichienda mberi.
Iri izano rakasarudzika raunogona kutenga masheya pa mitengo yakaderera kupfuura kuburikidza nemaitiro echinyakare. Inobatsira kwazvo kwenguva yakareba.
Iwe unogona kuwedzera mari yako mukambani. Saka kuti nenzira iyi, une kubva panguva iyoyo huwandu hwakawanda hwezvikamu. Uine iko mukana wekudzokorodza kwemasheya ako uchawedzerwa. Kunyangwe kuvagadzirisa kune chimiro chaunounza sewe mudiki uye wepakati investor.
Muzviitiko zvemakambani anopa migove kune avo vagovana navo, izvi zvinosanganisira nzira ye kubhadharisa imwe mari yemubhadharo uyu. Iine yakadzoserwa uye yakavimbiswa kudzoka pane kuchengetedza gore rega. Zvisinei nekuti masheya anotengeswa sei pamisika yemari.
Mune zvimwe zviitiko inzira yekuvhura zvigaro mumusika wekutengesa ne zvinorema kuderedzwa zvine chekuita nekutengwa kwezvikamu kuburikidza nemaitiro akajairika. Kunyangwe zvichange zvichinakidza kuti iwe uverenge mamiriro ekuwedzera kwemari iwe aunofarira panguva iyoyo.
Kwete chete nekuti iko kuwedzera mari, ichave iri basa rinobatsira kwazvo. Nekuti zvirokwazvo, zvinogona kunge zvakapesana uye une rimwe dambudziko panguva yekusaina izvi zvakajairika mashandiro mumari.
Kwegore rose, iwe uchave nezvikumbiro zvakati wandei zveaya maitiro. Kusvika padanho rekuti inogona kuumba inopfuura imwechete kusahadzika iyo inogona kukuisa iwe mukusungwa kwakakomba. Kuti udzivise zviitiko izvi, hauzove nesarudzo kunze kwekusarudza iwo mashandiro anokupa iwe zvivimbiso zvakanakisa. Kusazviita kunogona kukubhadharira mari kubva nhasi zvichienda mberi.
Iwe zvakare haugone kukanganwa kuti iwe unofanirwa ongorora hunyanzvi chimiro kukosha kweichi chiitiko. Nekuti hazvizove zvakafanana kuzviita uine kumusoro kumusoro pane kune imwe yeakasiyana zvachose kusimba. Uye kuti iwe unogona kuve chinhu chinosarudzira kubudirira kana kwete kwekuwedzera kwemari. Kunge mamwe manhamba anogadzira hunyanzvi hwayo.
Chekupedzisira, haugone kutonga kuti aya mashandiro haazove akanaka kwazvo, kunyangwe kuti iwe ugone kurasikirwa nemari mune yako yekudyara portfolio. Neichi chikonzero, yako sarudzo inofanirwa kuve mhedzisiro ye kufungisisa kwakakura. Hazvishamisi kuti mari zhinji iri panjodzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Iwe unofanirwa kuenda kune iyo capital kuwedzera?
Maitiro ekutora mukana weiyo brick boom muSpain
Maitiro mashanu ekudyara mumwedzi waNyamavhuvhu